बेपत्ता परिवारको पीडा - कुनै दिन टुप्लुक्क आउनु पो हुन्छ कि भन्ने लागिरहन्छ ।
बेपत्ता परिवारको पीडा : कुनै दिन टुप्लुक्क आउनु पो हुन्छ कि भन्ने लागिरहन्छ ।
उहाँलाई बेपत्ता पार्ने त्यतिबेलाको प्रहरी इन्स्पेक्टर कुशविक्रम राणालाई भेटेर सोध्ने मन छ - "राज्यका रक्षक भनिने सुरक्षाकर्मीले जनताको छोरालाई गिरफ्तार गरेर कहाँ लुकाएर राख्नुभएको छ ? कृष्ण सेनलाई जस्तै कुटेरै मार्नुभएको पो हो कि ?"
लेफ्ट रिभ्यु संवाददाता २०७५ फागुन १२ गते आइतवार
मेरो नाम बिमला ढकाल हो । गोरखा जिल्लाको हर्मी गा.वि.स.मा मेरो घर थियो । श्रीमान् शिक्षक हुनुहुन्थ्यो । उहाँको नाम राजेन्द्र ढकाल हो । तीन स–साना छोराछोरी थिए । नपुग्दो केही थिएन । म घरको काम गर्थें । श्रीमान् जागिर गर्नुहुन्थ्यो । हामी दुःख सुख बाँडेर शान्तिले बाँचिरहेका थियौँ ।
जनयुद्ध सुरु भएपछि उहाँ पनि भूमिगत हुनुभयो । पार्टीले उहाँलाई तनहुँ जिल्लामा जिम्मेवारी दिएर खटायो । उहाँ त्यहाँको सेक्रेटरी हुनुभएको थियो । यो २०५४/०५५ साल तिरको कुरा हो ।
२०५५ चैत २४ गते श्रीमान् साथीसँग राम्दीखोलामा नुहाउँदै हुनुहुन्थ्यो । त्यहीँबाट प्रहरी इन्स्पेक्टर कुशविक्रम राणाको नेतृत्वमा आएको टोलीले उहाँहरूलाई वारेन्ट पुर्जीविना नै पक्राउ गरेको थियो । तनहुँको खैरेनीटार प्रहरी चौकीमा राखेको छ भन्ने खबर लिएर दुई दिनपछि उहाँका दुई साथी घर फर्केका थिए ।
एक वर्षको छोरा, पाँच र सात बर्षीया दुई छोरी लिएर म उहाँलाई खोज्न प्रहरी चौकी धाउन थालेँ । उहाँसँगै गिरफ्तारीमा परेर तीन दिनपछि छाडिएका प्रेमबहादुर थापा र मीनदत्त अधिकारी दुई शिक्षकको जाहेरीमा मैले अदालतमा मुद्दा दायर गरेँ । सर्वोच्चले मेरो श्रीमानको ‘खोजी गर्नू, सत्यतथ्य जवाफ दिनू’ भनेर मुद्दा फैसला गरिदिएको थियो तर सरकारले त्यो फैसला कहिल्यै कार्यान्वयन गरेन ।
उहाँलाई बेपत्ता पार्ने त्यतिबेलाको प्रहरी इन्स्पेक्टर कुशविक्रम राणालाई भेटेर सोध्ने मन छ । राज्यका रक्षक भनिने सुरक्षाकर्मीले जनताको छोरालाई गिरफ्तार गरेर कहाँ लुकाएर राख्नुभएको छ ? कृष्ण सेनलाई जस्तै कुटेरै मार्नुभएको पो हो कि ? किन सत्य कुरा बोल्न डराइरहेको छ सरकार ? मेरो श्रीमान् कहाँ हुनुहुन्छ ? कहिलेसम्म उहाँ आउने आशामा बसिरहने हो ?
सुन्दै छु कुशविक्रम अहिले रिटायर्ड भइसकेका छन् रे । पोखरामा घर बनाएर बस्छन् रे । अरूको शान्तिले चलेको जीवनमा आगो लगाएर कसरी आनन्दले बस्न सक्दो हो मान्छे मलाई अचम्म लाग्छ ।
एकपटक म कामविशेषले दुई छोराछोरी लिएर कतै जाँदै थिएँ । ४ र ८ वर्षका छोराछोरी लिएर गाडीमा बसिरहेकी थिएँ । चेकजाँच गर्ने ठाउँ आएछ । सबै यात्रु गाडीबाट ओर्लेर चेक गर्ने लाइनमा उभिए । म पनि उभिएँ । सबैलाई चेक गरेर छाडिदियो तर मलाई एकछिन सोधपुछ गर्नु छ भनेर रोकिन भन्यो ।
म रोकिएँ । मेरा लागि भनेर गाडी रोकिएन । दुई स–साना मेरा छोराछोरीसमेत लिएर मैले हेर्दाहेर्दै गाडी हुइँकियो । म यता कराउने नानी उता चिच्याउने गरे पनि न गाडी रोकियो, न चेकिङमा उभिएको प्रहरीले नै मलाई जाने आदेश नै दियो । अनेकथरि बेतुकका प्रश्नको जवाफ दिँदादिँदा म थाकिसकेकी थिएँ । अर्कोतिर बच्चाहरू कता अलपत्र परे भन्ने चिन्ताले पनि सताएको थियो । त्यतिबेला अहिलेजस्तो मोबाइल सुविधा थिएन ।
बेलुकी सात बजेतिर बल्ल म प्रहरीको फन्दाबाट मुक्त भएँ । दुई घन्टा लगाएर हिँड्दै, लड्दै फेरि उठेर हिँड्दै, रुँदैरुँदै मामाघर पुगेँ । बाटोमा देख्नेले मलाई बौलाही भने होलान् । बच्चाहरू कता गए, केही थाहा पाउन सकिनँ । एकातिर श्रीमान् बेपत्ता, अर्कोतिर बच्चा बेपत्ता । कठै मेरो जीवन देखेर आफैलाई वैराग लागेर आयो । तीन दिनपछि बल्ल छोराछोरीसँग भेट भयो ।
संयोगले त्यो दिन गाडीमा मसँगै पढेको एकजना साथी रहेछन् । उनले मेरा छोराछोरीलाई मेरो माइतीघर पुर्याइदिएछन् । धन्न, त्यो दिन यसरी मेरा बच्चाहरू सुरक्षित मामाघर पुगेछन् । म भगवान्माथि विश्वास त गर्दिनँ तर त्यस दिन ती साथी भगवान्जस्तो भएर आएका थिए । उनी नहुँदा हुन् त मेरा स—साना केटाकेटीको के हालत हुँदो हो । यत्तिका वर्षपछि आज पनि त्यो दिन सम्झिँदा मनमा त्यसैत्यसै अत्यास लागेर आउँछ ।
२०५५ साल मंसिरमा आफ्नी जीवन संगिनीसँगको अन्तिम भेटमा बेपत्ता योद्धा राजेन्द्र ढकाल
ती दिन निकै कष्टपूर्ण थिए । म नजिकैको महेन्द्र माविमा पढाउँथेँ । प्रहरीको अति नै ज्यादती थियो । जतिबेला मन लाग्यो उतिबेला स्कुल आँउथे । ‘एकछिन कुरा गर्नु छ’ भनेर मलाई जंगलतिर लिएर जान्थे । मेरा साना छोरीहरू आएर मेरो सारीको सप्को समाउँथे, रुन्थे तैपनि ती प्रहरीको मन कहिल्यै पग्लिएन । स्कुलका शिक्षक शिक्षिका आएर हात जोड्दा पनि मलाई कहिले जंगल, कहिले चौकी लिएर जान्थे र केही दिनपछि मात्र फर्काउँथे ।
त्यतिबेला मेरो काखमा एक वर्षको दूधे बच्चा थियो । उसलाई काखमा लिएर दूध खुवाइरहेको बेला पनि बच्चा छाडेर हामीसँग हिँड भन्दै प्रहरीले बन्दुकको कुन्दाले हान्न खोज्थे । म छिमेकीलाई बच्चा जिम्मा लगाएर लुरुलुरु तिनले जता लैजान्छन् त्यतै जान्थेँ ।
मैले आँगनमा सुकाएको बिस्कुन उठाउन पनि पाउँदिन थिएँ । बिस्कुन छिमेकीले उठाइदिन्थे । गोठमा भैँसी कराइरहेको हुन्थ्यो, घाँस छिमेकीले हालिदिन्थे, भैँसी उनैले दुहुन्थे । मेरा छोराछोरीलाई उनैले खान दिन्थे, स्याहार गरिदिन्थे, श्रीमान्लाई आतंककारी आरोपमा बेपत्ता पारेका थिए । प्रहरीको नजरमा आतंककारीकी श्रीमती म पनि खुंखार आतंककारी बनाइएकी थिएँ ।
मलाई दिनदिनै तारिख धाउनुपर्ने भयो । प्रहरी दमन अति चर्को भयो । एकपटक त महिना दिनसम्म मलाई चौकीमै राख्यो । मानसिक र भौतिक यातना कति दियो दियो, साध्य नै भएन । कपालबाट पानी खन्याइदिन्थे । आँखामा पट्टी बाँधिदिन्थे । कुटिरहन्थे । लुछिरहन्थे । लतार्दै चौकीमा भित्र र बाहिर गराइरहन्थे । घरमा भएको बेला पनि रात दिन आएर मलाई धेरै मानसिक यातना दिइरहन्थे । बुटजुत्ता लगाएर सबैतिर चाहार्ने, भकारीको धान पनि फालिदिने, पकाएको खाना पनि फालिदिने गर्थे ।
यस्तो ज्यादती भएपछि म हर्मीको घर, पायक पर्ने जागिर र सबै थोक छाडेर बच्चामात्र काखमा च्यापेर काठमाडौँ आइपुगेँ ।
‘अब त उहाँलाई सम्झनभन्दा बिर्सन सजिलो भएको छ । ‘तैपनि कुनै दिन टुप्लुक्क आउनु पो हुन्छ कि भन्ने लागिरहन्छ ।’
पार्टीले मन लगाएर बेपत्ताको खोजी गरिदिएन । अलि जोडतोडले लागेको भए केही हुन्थ्यो कि ।सहिदकै जस्तो ‘क्याटोगरी’मा बेपत्तालाई नराखिदिए हुन्थ्यो ।’ बेपत्ता त बेपत्ता नै हो नि कुनै दिन फर्किन सक्छन्, भेटिन पनि सक्छन् ।
(बेपत्ता परिवार बिमला ढकालसँग आस्था केसीले गरेको कुराकानीमा आधारित । फोटोहरु बिमला ढकालको फेसबुकबाट ।)
पछिल्लाे - नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनका वरिष्ठ नेता श्रेष्ठको निधन, नेकपा क्रान्तिकारी (माओवादी)ले निकाल्यो शोक वक्तब्य
अघिल्लाे - विघटित कार्यदलका पाँच सदस्यद्वारा प्रतिवेदन बुझाइयो (प्रतिवेदनकाे पूर्ण पाठसहित)